कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत असमानता
जनतापाटी शुक्रबार, साउन २९, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक आर्थिक गतविधिसम्बन्धी एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
अध्ययनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुस मसान्तसम्म रू. ३६ खर्ब ५४ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५६ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा वागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको छ । रकमका आधारमा उक्त प्रदेशमा २० खर्ब ७९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह भने कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । कर्णालीमा कुल कर्जा प्रवाहको १ दशमलव २ प्रतिशत मात्र अंश रहेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमका आधारमा कर्णालीमा रू. ४३ अर्ब ८५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी कार्यक्रम पनि वागमतीमा नै बढी गरेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियो । सीएसआरसम्बन्धी दुई तिहाइ कार्यक्रम वागमती प्रदेशमा नै हुने गरेको राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।